Oololiwe baseFrance baba yimyuziyam yobugcisa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba igrafiti ifumanekile kwezi izithuba ezingwevu neekona indawo yayo ekhethekileyo Ukunika umbala esitratweni okanye kwindlela yesixeko, sinokufumana ezinye imizobo okanye imizobo ukuze amagcisa akwazi ukubonisa imiboniso yabo kwaye ngenxa yoko abasebenzisi beenkonzo ezithile banokuncoma isandla okanye izimvo zabo bapeyinti bakhulu.
I-SNCF, inkonzo kaloliwe yase-France kuzwelonke, ize nayo umbono omnandi wokukhuthaza abemi ukusuka kwilizwe labo ukutyelela oololiwe babo ukuba babone imisebenzi yobugcisa. Kwaye into kukuba iprojekthi ifuna ukuba kungabikho sizathu sokuhamba naphi na ngelixa usazi imifanekiso ekumgangatho ophezulu.
Kwisivumelwano sentsebenziswano kunye nenkampani yokuvelisa yaseMelika i-3M, iSNCF inike oololiwe ukuphakamisa ubuso ukuze iindawo zabo zibe ziindawo apho ungathandayo imizobo kunye neembonakalo ezahlukeneyo ezibonakalayo.
Zigubungela izinto zangaphakathi ngefilimu leyo iqulethe imisebenzi yobugcisa edumileyo ukwenzela ukuba abakhweli bonwabe xa besiya kwiindawo abaya kuzo. Uyilo lubandakanya intyatyambo yemifanekiso kunye neefanitshala zefanitshala ezivela kwiNdlu yaseVersailles, ubugcisa be-impressionist obuvela eMusée d'Orsay kunye nemifanekiso evela eCinema Gaumont, inkampani endala yefilimu.
Kwaye ayisiyiyo kuphela la manqaku anomsebenzi ophambili wokuzonwabisa kunye nokunconywa kobugcisa, kodwa enze ubomi babanomdla ngakumbi kubahambi. Ikwancede ukunqanda ukonakalisa oololiwe. Zonke zinye ukubheja okukhulu kwenkcubeko ukuba xa ababukeli bengayi kwiimyuziyam, yeyiphi indlela ebhetele kunokuthatha loo misebenzi yobugcisa bayise koololiwe abayisebenzisayo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Ukuya kwezinye iindawo kwaye ngethuba lokukwazi ukufumana ubugcisa kwiindawo ezininzi, le mifanekiso iqingqiweyo Ngokuqinisekileyo baya kuba nakho ukuthimba ingqalelo yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Oololiwe baseFrance batshintshelwa kwiimyuziyam zobugcisa